Isimemo se-2019 se-125th Canton Fair
Manene namanenekazi, Enkosi kakhulu ngenkxaso yenu yexesha elide kuZhejiang Yuan Cheng Auto Accessories Manufacturing Co., Ltd. Siza kuzimasa i-125th Canton Fair apho iimveliso ezithengisa izinto ezishushu kunye nezinto ezisanda kwenziwa ziya kuboniswa kubathengi. Sijonge ngokunyanisekileyo kutyelelo lwakho ku ...
Ukwehla kancinci ngoNovemba kwiglasi ethe tyaba
Iwebhusayithi yekomishini yophuhliso kunye nohlengahlengiso lwesizwe, ngoNovemba, imveliso yesamente yesizwe yehle nge-1.1, xa kuthelekiswa nokukhula kwe-8.9; Imveliso yeglasi yeflethi yehle ngo-6.7, 14.4 ukukhula ngexesha elifanayo kunyaka ophelileyo.
Ibhalansi yeglasi yexesha elifutshane
Ngokwendlela yokubeka iliso, kwimpuma ye-China, i-jiangsu HuaErRun 5 mm yexabiso leglasi yefektri ukuya kwi-1224 yuan / ton; Emantla China, hebei ukhuseleko 5 mm ixabiso iglasi ifektri mveliso ku 1032 yuan / ton. Kutshanje iglasi yentengiso isebenza kakuhle, kuba sele inguDisemba, emva kwexesha ngokwesiko ...
Ingxelo yeglasi yonyaka
Umgca wemveliso yeglasi edadayo iqala ishiye umva emva kotshintsho lwamaxabiso endawo, ke ngeli lixa amaxabiso ebuthathaka kodwa eqala okanye engahambi ezantsi, isantya sekhontrakthi yokubonelela okanye kwixesha elifutshane lingaphantsi kwesantya semfuno ewayo, uluhlu lwezinto ezinokwenzeka luya kuqhubeka nokuhamba phezulu. Kodwa ngenxa yeglasi yokudada ...
Ukuphakama kweglasi akunakulondolozeka
Ixesha elizayo leGlasi linyuka kwakhona, iikhontrakthi ezili-1609 ukusukela kuma-973 yuan / ngetoni ephindaphindayo, yabuya yenyuka yaya kwangoko kwi-1060 yuan / ton, iphantse yaya kufikelela kwi-9%. Kwixesha eliphakathi, nangona kunjalo, eli liza lokuphindaphinda kweekhontrakthi ezingama-1609 azizinzanga, kamva kwi-930-930 yuan / ton range oscillation of probability is bigger. I-sp ...
Kupholiswa imoto epholileyo 12v, 12v Isikhenkcisi seMoto esiPholileyo, Intente edumileyo yeMoto, Imoto epholileyo yeWayini, Gquma Ngaphantsi Kwemoto, IMako Car Cooler,